Ny homamiadan'ny kanseran'ny uterus - famantarana sy famantarana, fitsaboana
Ny homamiadan'ny kansera - ny antony sy ny soritr'aretin'ny karazana kansera rehetra
Ny homamiadan'ny homamiadana dia aretina matetika amin'ny oncologique ny rafitra fananahana. Ny pathology dia manana fiandohan'ny fihenana, noho izany dia zara raha jerena ny dingana voalohany. Andeha hodinihintsika amin'ny an-tsipiriany ny kanseran'ny endometrium: ny soritr'aretina sy ny famantarana, ny antony, ny endrika, ny làlana fototra amin'ny fitsaboana.
Ny homamiadan'ny kansera - mety ho tratran'ny loza
Ao amin'ny marary manana homamiadan'ny fitsaboana, ny taona dia mihoatra ny 45-50 taona. Ny fiasan'ny trigger ho an'ny fanovana ara-drafitra ao amin'ny efi-tranon'ny tranonjaza dia ny dingana mifandray amin'ny menopause. Ny fandroahana ny rafitra fananahana dia tsy mandalo tsy misy andalan-teny ho an'ny vatana. Ao anatin'ireo tranga hafa mety hampidi-doza, ny dokotera dia mamaritra ny fepetra toy izao:
ny aretina ao amin'ny rafi-pandaminana, ny metabolika amin'ny vatany - diabetes mellitus, ny fiterahana;
Ny aretina miankina amin'ny hormone ao amin'ny rafitra fananahana - hipetrapetraka;
hormone-ovater voan'ny hormonina - ny tsorak'i Brenner amin'ny tranga fahadimy dia miaraka amin'ny homamiadana;
Stein-Levental syndrome - miaraka amin'ny homamiadan'ny endometrial amin'ny 30% ny tranga;
ny lova mavesatra - ny fisian'ny havany akaiky amin'ny fivontosana;
ny fanombohana ny fanaovana firaisana ara-nofo, ny tsy fisian'ny izany;
ny tsy fisian'ny vohoka sy ny fiterahana amin'ny anamnesis;
taonan'ny taolana (taorian'ny 55 taona);
Ny fizarana ny fitsaboana hormone (fampiasana ny Tamoxifen).
Kanseran'ny oniversite - fanasokajiana
Araka ny fikambanana iraisam-pirenenana iraisam-pirenena, ny homamiadan'ny tranon-jaza dia misara-bazana amin'ny endrika morphologique manaraka:
carcinoma sela misy sela;
kanseran'ny tsy ampy.
Ny adenokarcinoma amin'ny endometrial kely
Ny fanadalana adenokarcinoma mazava kokoa dia miseho matetika kokoa noho ireo endrika fanindrahindrana hafa. Ho an'ity karazana kansera ity, dia miharihary ny fisian'ny faritra ao amin'ny faritra voan'ny aretin'ny sela malemy. Matetika izy io no manamarika ny fisehoan'ny sela mahazatra izay mitovitovy amin'ny elanelan'ny adenocarcinomas amin'ny sela. Ny manam-pahaizana sasantsasany dia manondro ny sela sy ny cellules meson-fusion amin'ity vondrona ity. Ireo singa ireo dia miseho amin'ny endriky ny fantsika amin'ny kiraro miaraka amin'ny satroka.
Karazana kanseran'ny oniversite
Ny homamiadan'ny kanseran'ny nonometrium dia ny atiolojia izay ahitana sela mpitrandraka ny ankamaroany. Amin'ny fampiharana, ny adenocarcinoma glandular dia misy fiantraikany amin'ny valanaretin'ny tranon-jaza sy ny lakana mihetsiketsika. Ity karazana homamiadana ity dia manakaiky ny 70% amin'ny dingana rehetra momba ny oncologie, matetika no hita amin'ny vehivavy zokiolona, ​​saingy hita any amin'ny tanora ihany koa.
Karazam-bozaka sela misy tsiranoka
Ny karazana kanseran'ny sela ao amin'ny tranonjaza dia manondro ny neoplasme malemy. Ny fananganana ny tsahala dia avy amin'ny sela avy amin'ny epithelium, izay mahazo ny atypia isan-karazany. Miaraka amin'ny fivoaran'ny psykôlôjika eo amin'ny dingana manaraka, miova ho any amin'ny faritry ny lakandrano ny sela. Amin'ireny tranga ireny, dia voan'ny aretina ny onkologie mandritra ny fikarohana momba ny tovovavy. Noho ny tsy fahampian'ny sarimihetsika mazava, dia tsy hita ao anatin'ny dingana am-boalohany izy io. Ny soritr'aretina tsy fahita firy dia ahitana hoe:
dysfunction of the bladder and rectum;
tsotsotra sy leucorrhoea.
Karazam-bozaka sela misy sela misy endometrium
Ny kanseran'ny sela misy sela misy sela misy endometrialina dia endriny miavaka. Ny toetra iray mampiavaka azy dia ny fisian'ny tsaho izay misy rafitra maivana. Ny fitambaran-javatra mihetsiketsika sy manodinkodina dia misy ao anatin'ireny rafitra ireny. Matetika, ny sela feno bibikely dia manjaka amin'ny glandular. Io karazana homamiadan'ny endometrie io dia miteraka 4% amin'ny tranga rehetra momba ny aretina. Ny mahazatra indrindra amin'ny vehivavy efa zato taona mahery, amin'ny tranga tokana dia miseho amin'ny tanora.
Raha ampitahaina amin'ny adenocarcinomas hafa, ny karazana kôngy misy sela malemy dia manana fahasamihafana ambany. Noho ireny endri-javatra ara-drafitra ireny, dia matetika no mitranga ny fivontosana. Macroscopically, tsy misy ny fampiasana fitaovana amin'ny fitomboana lehibe, io endrika io dia tsy misy fahasamihafana amin'ny adenocarcinomas hafa. Ny endriny dia mitovy amin'ny fanolorana polypoid na fery. Ny famaritana ny endriky ny psykôlôjika dia natao amin'ny sehatry ny mikrôpôkôpia, manamarika ny halavan'ny fanavahana ny singa tsirairay.
Serous ny endometrial serous
Ny homamiadan'ny serfa dia anisan'ny andian-tsarobidin'ny epithelial. Ny patholojia dia miforona amin'ny sela miovaova na voan'ny epithelial tissue. Amin'ity tranga ity, matetika dia sarotra ny mametraka ny fiandohan'ny toy izany. Ity endrika ity dia manamarina ny fihodinan'ny latabatra, ary hita rehefa tsapan'ny vehivavy tsindraindray amin'ny tsingerina, ny rafitra fananahana. Ny famantarana ny homamiadan'ny endometrialan'io endrika io dia sarotra ny mamantatra ilay vehivavy.
Ity karazana onkôlôsy ity dia miavaka amin'ny fielezan'ny sela izay misy mucin intra-cytoplasmic ao anatiny. Ity endriky ny psykolojia ity dia mitatitra ho 10% amin'ny tranga rehetra momba ny oncologie an'ny vatan'ny uterus. Ny toetra mampiavaka ny neoplasma dia ny fanavahana avo lenta ny singa mpikorisa, izay nohamafisin'ny diagnostika ultrasound sy ny mikrosopia fanampiny amin'ny lasibatra. Ny voan'ny kanseran'ny moka dia matetika ataon'ny dokotera ho vokatry ny fanangonam-bozaka.
Kanseran'ny kanseran'ny tranonjaza - famantarana sy famantarana
Rehefa mipoitra ny homamiadan'ny kanseran'ny endometrie, dia mitranga ny soritr'aretina rehefa afaka fotoana fohy. Ny ankamaroan'ny marary dia tsy mitaraina rehefa misy ny neoplasma. Izany dia manazava ny fandinihana matetika ny aretina eo am-pitadiavana ny antony mahatonga ny tsy fetezana amin'ny rafitra fananahana. Ny soritr'aretina manan-danja izay manondro ny homamiadana dia ny fandosirana ny uterine.
Ireo entana ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny vanim-potoanan'ny ratra. Mahazo tombontsoa izy ireo, matetika miaraka amin'ny fahantrana kely, izay mamitaka ny marary. Ny vehivavy dia mandray ny soritr'aretina mandritra ny volana isam-bolana ary mijery dokotera raha tsy aorian'ny famerenana azy indray. Ny fitarihana ny diagnostika samihafa dia manampy amin'ny fametrahana ny tena antony mahatonga ny fitsaboana amin'ny ra - kanseran'ny endometrium uterine.
Rehefa mandroso ny fandehan-javatra, dia mihamitombo ny soritr'aretina. Anisan'ireo famantarana famantarana aretina toy ny kanseran'ny fiterahana, ilaina ny manavaka:
Ny endriky ny fotsy hoditra dia fitsaboana maloto avy amin'ny taratasy mivalona. Mitranga rehefa mitombo ny fivontosana. Ny fitrandrahana ao an-damosin'ny valanaretina toy izany, dia miteraka fahatsapana mampihetsi-po ao ambany kibo, mampiavaka ny toetra.
Fandotoana avy amin'ny vava. Ny fanitsakitsahana ny fipoahan'ny leucorrhea dia mety miteraka otrikaretina, miteraka ny fananganana pyomètra - fananganana ny voankazo ao an-dohasaha. Ny vehivavy dia manatsara ny fisehon'ny fangirifiriana, ny fitomboan'ny hafanana amin'ny vatany, ny fahasimbana amin'ny fahatsarana ankapobeny.
Syndrome Pain - dia miseho rehefa mihanaka ny fizotran'ny aretina, ny fiovan'ny toetrandro ao anaty lavaka fanenitra. Amin'ny firongatry ny fivontosana haingana dia misy ny fihenan'ny aviavy, misy ny fanaintainana ao amin'ny faritra malemy.
Fanitsakitsahana ny fizotran'ny fanadiovana sy ny fanesorana. Ny habetsaky ny fivontosana voalohany dia miteraka ny fisehoan'ny soritr'aretina fanampiny (fahantrana amin'ny fanadiovana, fanesorana, tenesmus - diso, fanerena mampihoron-koditra).
Fanitsakitsahana ny tsingerim-bolana - manalefaka, manalefaka, mampitombo ny habetsaky ny ran'ny menstrual. Matetika mifandray amin'ny fanovana hormona amin'ny vatan'ny marary.
Kanseran'ny kanseran'ny oniversite - dingana
Miankina amin'ny fisehoana sy ny fiantraikan'ny korontana, ny taom-piasana manaraka ny homamiadan'ny uterôtista amin'ny tranonjaza, araka ny fanasokajiana ny Federasiona Iraisam-pirenena momba ny Fiompiana sy ny Gynecologists (FIGO):
1. Dingana zero (0) - misy ny hyperplasia amin'ny endopetan'ny atomika, izay dingana voalohany amin'ny oncology.
2. Ny dingana voalohany - ny fitsaboana dia tsy mihoatra ny vatan'ny uterus (IA-C). Ilaina ny manavaka azy:
Ny dingana IA - tsy manasitrana ny fivontosana ao anatiny, voafetra amin'ny epithelium;
Ny dingana lehibe - ny lozika manerantany dia tafiditra ao anatin'ilay dingana arahina, ary tsy mahatratra ny tapany afovoany;
Ny dingan'ny IS - karazam-boasary dia mitsimoka ny antsasaky ny haavo sy ny lalotra, saingy tsy tonga any amin'ny serosa.
2. Ny dingana faharoa dia mizara amin'ny:
Iray - ny vatana ihany no tafiditra;
Ny dingana faharoa - voina voajanahary.
3. Ny dingana fahatelo - ny homamiadan'ny endometrioma dia mamela ny sisin'ny taova, saingy tsy mihoatra ny tohodrano. Miankina amin'ny toetran'ny klioba, ity sehatra ity dia mizara amin'ny:
ИІІА - kardinoma mitsimoka serous membrane na misy fiantraikany amin'ny appendages;
IICIS - dia miharihary amin'ny fisehoan'ny metastazy ao amin'ny tadin'ny lymph adjacent.
4. Fahaizana fahefatra:
Ny fitsaboana dia mitsimoka ao amin'ny bakteria na rctum - IVA.
ny endriky ny metastazy lavitra ivelan'ny valizy kely - IVB.
Kanseran'ny kansera - aretina
Ny marika famantarana ny homamiadan'ny endometrialin'ny uterus dia porofo amin'ny fandinihana ny marary. Mba hahatratrarana izany:
vaginal ultrasound of organ organs;
fanasitranana fitsaboana - fanasitranana vatomamy sy fitsaboana ho an'ny mikrosopia fanampiny;
fandrakofana momba ny taovam-pananahana;
Kanseran'ny oniversite amin'ny alàlan'ny ultrasound
Ny homamiadan'ny ultrasound, ny mari-pamantarana izay voatonona etsy ambony, dia azo tsapain-tànana amin'ny fahitana angano. Ao amin'io fianarana io, mahita dokotera tsy misy fetra ny dokotera. Ny tadidia kely dia nitombo ny herioticity sy ny rafitra homogenny. Amin'io tranga io, ny fifandimbiasan'ny tsaho dia matetika (na oviana na oviana, miova ny sisiny). Ny fitondran-drivotry ny akomaizin'ny tchonora dia miteraka fiantraikany mahery vaika, izay mampivelatra ny siôko. Ny dokotera no manamarina ny homamiadan'ny kanseran'ny uterus, ny soritr'aretina izay nohamafisin'ireo fanadihadiana.
Ny homamiadan'ny kansera - ireo mpankafy
Onkomarkery - vovoka zava-mahadomelina, voajanahary ao amin'ny sela homamiadana. Misy molekiola proteinina izy ireo, ka atambatra ny lipidida sy ny kôbôhyhyrat. Ny marika dia mivoatra arakaraky ny dingana amin'ny fizotry ny aretina, ny toetran'ny firafitry ny fivontosana. Amin'ny ankapobeny dia miditra ao amin'ny rà izy ireo, izay ahitan'izy ireo ny fanampiana amin'ny fandalinana laboratoara. Mba hahitana ny kanseran'ny endometrialin'ny microinvasive, ny marary dia asaina hanaraka ireto marika manaraka ireto:
Karazam-bovoka karazana sela (SCCA);
kalsioma CA 27-29.
Ny homamiadan'ny kansera - fitsaboana
Nianatra momba ny aretina mampidi-doza, ny fanontaniana voalohany amin'ny marary: ny fitsaboana na tsia ny homamiadan'ny endometrialina. Ny dokotera dia miresaka momba ny fanarenana mety. Ny vokatry ny fahombiazana dia miankina amin'ny karazana aretina, fahasamihafana eo amin'ny aretina, dingana. Ireo fitsaboana manaraka dia ampiasaina amin'ny fitsaboana:
Ny safidy amin'ny fomba fitsaboana dia miankina amin'ny antony maro. Rehefa mifidy ny fomba fitsaboana ara-pahasalamana, dia ireto manaraka ireto no jerena:
dingana ny aretina;
ny fiparitahan'ny tsipoapoaka ankoatra ny taova.
Amin'ireo fomba ireo dia ampiasaina matetika kokoa ny fikarakarana. Mampihena ny fiverenan'ny homamiadan'ny endometrialina izany. Mandritra ny fandidiana, ny dokotera dia tsy manala ny vatan'ny voany avy amin'ny taova, fa jereo koa ireo manodidina azy. Ny fandaharam-pitsaboana dia ahitana:
fanavaozana ny tonon-kibo;
mitarika biopsy amin'ny lymph nodes;
Fikarohana momba ny fitiliana cytolojika momba ny lasibatra.
Raha miorina amin'ny vokatra azo nandritra ny fanaraha-maso, dia misy fanapahan-kevitra raisina amin'ny sehatry ny fandidiana:
fandroahana ny tranonjaza (fanesorana ny taova rehetra) miaraka amin'ny appendages;
Ny fitsaboana radika amin'ny tranonjaza miaraka amin'ny appendages sy ny lymphadenectomy - ny fanesorana ny uterus miaraka amin'ny fototry ny lympha eo an-toerana.
Ny homamiadan'ny kansera - prognose
Ny famaritana rehefa manaporofo ny vokatry ny aretina dia:
ny halalin'ny fiovan'ny fanodikodinana;
Ny iray amin'ireo antony mamaritra dia ny homamiadana ny homamiadan'ny kanseran'ny endometrie, izay hita ao amin'ny tadin'ny lymph. Voamarina fa ny statistika momba ny homamiadan'ny kanseran'ny endometrie voalohany dia 82% amin'ny marary dia miaina dimy taona na mihoatra. Rehefa mijery ny aretina amin'ny dingana faharoa sy ny fitantanana ara-dalàna ny fitsaboana, dia 65% ny marary rehetra dia velona mihoatra ny dimy taona. Ao anatin'ny 25% amin'ny toe-pahasalamana dia misy ny fivoaran'ny aretina amin'ny toetr'andro.
Tsy fahampian'ny cardia
Syndrome ny ratra lalim-piainana - soritr'aretina
Mangatsiaka ny maso
Constant Heartburn - Antony
Hygroma amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tanany
Ahoana ny fomba hanavahana ny fery amin'ny ratra?
Iodine ho an'ny fantsika
35 manohina ny sarin'ireo papa izay nahita ny zanakavavy tao amin'ny akanjo fampakaram-bady
Musées de Dubai
Soup miaraka amin'ny kalsioma sy ny fofom-bary
Ahoana ny fomba hanasana ny teratany Yorkshire?
Ahoana no hikarakarana ny volonao?
Amin'ny inona no manao akanjo mainty tsy misy akanjo?
Ahoana no hanaovana latabatra ho an'ny saribakoly?
Ny soritr'aretina amin'ny vehivavy
Ankizy Angelina Jolie dia nandeha tany amin'ny sarimihetsika momba ny fitiavana ary nitsidika toeram-pivarotana lehibe iray
Vorona avy amin'ny tavoahangy iray